Dandelion လက်ဖက်ရည် - ယင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုသိပြီးမည်သို့ယူရမည်ကိုလေ့လာပါ။
Gynecomastia: အဲဒါဘာလဲ။ အကြောင်းရင်းများကဘာလဲ။ ဘယ်လိုကုသမလဲ ဒီမှာရှာပါ။
မင်းသမီး	 15 ဧပြီလ 2018
အဝလွန်ခြင်းကိုတိုက်ဖျက်ရန်ခက်ခဲသောစစ်ပွဲသည်အစွမ်းထက်သောမဟာမိတ်တစ်ခုရရှိခဲ့သည် Saxendaအင်အားကြီးမားသောမူးယစ်ဆေးဝါးတစ်မျိုးသည်အစာစားလိုသည့်ဆန္ဒကိုလျှော့ချနိုင်ပြီး၎င်းအားသောက်သုံးသူတို့၏စုစုပေါင်းအလေးချိန်ကို ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိလျှော့ချနိုင်သည်။
သို့သော်ဤဆေးသည်အချိန်ကြာမြင့်စွာတည်ရှိပြီးအထူးသဖြင့်ပြည်ပ၌ပင်လူသိများသည်ဟုဆိုရန်အရေးကြီးသည်။ ဒါဟာဘရာဇီးမှာစကားပြောဆိုမှုကွဲပြားခြားနားသည်နှင့် Saxenda ထိုကဲ့သို့သောလူသိများတဲ့မူးယစ်ဆေးမဟုတ်ကြောင်းထွက်လှည့်။
Saxenda ကိုဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ။ ဘယ်လောက်ပါလဲ?
Saxenda သည် ၂၀၁၆ ဒုတိယနှစ်ဝက်တွင်ဘရာဇီးရှိဆေးဆိုင်များသို့သာစတင်ရောက်ရှိနိုင်ပြီး၊ အထူးသဖြင့်ဥပမာအားဖြင့်သင်သည်မြို့ငယ်လေးတစ်ခုတွင်နေထိုင်ပါက၎င်းကိုရှာဖွေရန်ခက်ခဲလိမ့်မည်။
ထို့အပြင်စျေးနှုန်းမှာအနည်းငယ်မြင့်မားနိုင်သည်၊ အဓိကအားဖြင့်၎င်းသည်သွင်းကုန်မူးယစ်ဆေးဝါးဖြစ်ပြီး၊ တိုင်းပြည်သို့ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်အင်တာနက်ရှာဖွေမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး Saxenda ကို Drogaria Araújoနှင့် Drogaria Onofre တွင်ရောင်းချခဲ့သည်။ သူ့စျေးနှုန်းကဘာလဲဆိုတာသိဖို့အောက်ကကိုနှိပ်ပါ။
အခြားနည်းလမ်း - Over-the-counter ပိုပါးလွှာဖြည့်စွက်
ဤအကြောင်းကြောင့်၊ စာဖတ်သူအတော်များများသည်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုခုရှိသလားဟုမေးရန်နောက်ဆုံးတွင်ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူရန်စာရွက်မလိုအပ်သည်ကိုမေးမြန်းရန်ရှာဖွေကြသည်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမြဲတမ်းပြောလိုသည်များ QUITOPLAN၊ အရာတစ်ခု All- သဘာဝကဖြည့်စွက်သည်အလွန်အောင်မြင်ခဲ့!
စာဖတ်သူများစွာသည် ၀ ယ်ယူပြီးကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချရန်စီမံနေကြသည်။
Quitoplan သည်သဘာဝဖြည့်စွက်ချက်ဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်အဆက်အသွယ်ရှိပြီးအမြဲတမ်းဂျယ်လ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်၊ ၎င်းသည်အဆီပိုလျှံကိုအလွယ်တကူစုပ်ယူနိုင်ပြီး၎င်းသည်မစင်များမှဖယ်ထုတ်ပြီးကိုယ်အလေးချိန်ဖြစ်စဉ်ကိုအထောက်အကူပြုသည်။
Quitoplan ကိုအင်တာနက်ပေါ်တွင်သာရောင်းချနိုင်ပြီးသင်ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ။ ကုန်ပစ္စည်း၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုသာ ၀ င်ရောက်ပြီးသင်၏မှာကြားမှုကိုပြုလုပ်ပါ။
အကယ်၍ သင်သည်အွန်လိုင်းမှစျေးဝယ်ခြင်းအတွက်အသုံးမပြုနိုင်ပါက၊ ဆိုက်သည်လုံးဝလုံခြုံပြီးလိမ်လည်မှုမှကင်းလွတ်ကြောင်းသေချာစွာသင်ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပါသလား။ နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုမှာ Quitoplan သည်သင့်အားကုန်ပစ္စည်းကိုစမ်းသပ်ရန်ရက် ၃၀ ပေးသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်ဝယ်သည်နှင့်ရလဒ်များကိုသင်မကြိုက်လျှင်ငွေပြန်တောင်းပါ။
တရားဝင် ၀ ဘ်ဆိုဒ်မှသာ ၀ ယ်ယူခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်မှာမှတ်သားဖွယ်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်သာလုံခြုံသောစျေးဝယ်ခြင်း၊ အထူးလျှော့စျေးနှင့်အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်း၊ ပေးပို့ခြင်းအာမခံချက်၊ ထုတ်ကုန်မူရင်း။
စျေးနှုန်းအတွက်မူရရှိနိုင်သည့်ပစ္စည်းများအရတန်ဖိုးသည်ကွဲပြားနိုင်သည်။ တစ်ပုလင်း၊ သုံးပုလင်း၊ ငါးခွက်ဖြင့်သင်ဝယ်ယူနိုင်သည်။ တန်ဖိုးကိုသိရန်တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုသာကြည့်ပါ။
အထက်တွင်တွေ့မြင်ခဲ့သည့်အကျိုးကျေးဇူးများအပြင်၊ ဤထုတ်ကုန်ကိုဝယ်ယူခြင်းအားဖြင့်အိမ်တွင်းဒစ်ဂျစ်တယ်မဂ္ဂဇင်းများကိုအကြံဥာဏ်များ၊ အဆင့်ဆင့်ညွှန်ကြားချက်များ၊ ချက်ပြုတ်နည်းများ၊ လေ့ကျင့်မှုများနှင့်အခြားအရာများဖြင့်အိမ်သို့ယူဆောင်လာသည်။
မေးခွန်းများဖြေဆိုရန်အတွက်အက်ပလီကေးရှင်းနှင့်သီးသန့်အုပ်စုတစ်ခုသို့ဝင်ရောက်ခြင်းအပြင်။ အချိန်ဖြုန်းခြင်း၊ ကျန်းမာရေးနှင့်ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ချခြင်းနှင့်သင်အမြဲလိုချင်သည့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုအနိုင်ယူပါ။
Quitoplan သည်အောင်မြင်ပြီဖြစ်သည်။ သင်ကြိုးစား။ မရပါ။
ဘာကြောင့် Saxenda သွား၏ ဖြန့်ချိခဲ့သည် ဘရာဇီးမှ ANVISA နှင့်အခြားဆေးဝါးများမဟုတ်ပါသလော။
Saxenda နှင့်ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချရန်နိုင်ငံခြားတွင်သုံးသောအခြားဆေးဝါးအများစုအကြားအရေးပါသောခြားနားချက်ရှိပါသည်။ Saxenda ကိုနှုတ်ဖြင့်မယူပါ။
ဆေးထိုးနိုင်သောကြောင့် Saxenda သည်အများအားဖြင့်ဆေးဝါးများကဲ့သို့အစာစားချင်စိတ်ကိုနှိမ်နှင်းခြင်းဖြင့်ရိုးရှင်းသောနည်းဖြင့်အလုပ်မလုပ်ပါ။ လူတစ် ဦး သည်တစ်နေ့တာတွင်ဆေးပြားအနည်းငယ်သာစားသုံးခြင်းမပြုဘဲသွားရုံဖြင့်အစာစားချင်စိတ်ကိုဖိနှိပ်သည့်ဤဆေးများသည်ကျန်းမာရေးပြbringနာများဖြစ်စေနိုင်သည်။
၎င်းအစား Saxenda ကိုထိုးဆေးများဖြင့်သာအုပ်ချုပ်နိုင်သည်။ သတ်မှတ်ထားသောနောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက်ရှိရမည်။ အကယ်၍ လူသည်ပိုမိုကြီးမားသောဆေးပမာဏကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်၎င်းတို့၏ရလဒ်များကိုတိုးတက်စေလိုလျှင်၊
အများအားဖြင့် Saxenda အလွန်အကျွံသောက်သုံးခြင်းသည်ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ပျို့ချင်ခြင်း၊ ၀ မ်းလျှောခြင်းနှင့်အခြားအရာများကိုဖြစ်စေနိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်အငတ်ဘေးကိုမည်သည့်နည်းနှင့်မျှမကန့်သတ်နိုင်ပါ။
ထို့ပြင်အစာစားချင်စိတ်ကိုတားဆီးမည့်အစားအစာခြေချိန်ကိုနှောင့်နှေးစေနိုင်သည့်အခြားနည်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သောကြောင့်အဗစ်ဆစ်သည် Saxenda သည်ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်ကိုမခံစားရကြောင်းနှင့်၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်းသည်စောင့်ဆိုင်းသူများအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအကျိုးကျေးဇူးများရရှိစေနိုင်သည်ကိုနားလည်ခဲ့သည်။ နှင့်ကျန်းမာလမ်းအတွက်ကိုယ်အလေးချိန်။
ကံကောင်းထောက်မစွာပင် Saxenda သည်၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကျန်းမာရေးကိုမထိခိုက်စေကြောင်းသက်သေပြနိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ဤဖြစ်စဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်ရန်မူလကအလွန်အမင်းကိုယ်အလေးချိန်မကျသောသူများအတွက်အဓိကအထောက်အကူဖြစ်သည်။
အထူးသဖြင့်အသည်းအသန်အဝလွန်သူများသည်ကျန်းမာရေးတိုးတက်စေရန်နှင့်ကိုယ်အလေးချိန်တစ်ခုလုံးကြောင့်ဖြစ်ရသောရောဂါများကိုကာကွယ်ရန် ၄ င်းတို့၏ကိုယ်အလေးချိန်ဖြစ်စဉ်ကိုလွယ်ကူစွာပိုမိုငြိမ်းချမ်းသောနည်းဖြင့်ကိုင်တွယ်နိုင်ကြသည်။
Saxenda ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။ ဘာအတွက်လဲ
Saxenda သည် ANVISA မှခွင့်ပြုထားသောဆေးဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်အစာအိမ်နှင့်တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်သော်၎င်းသည်လူကိုစားပြီးမှသာ၎င်းသည်အလွန်တိကျသောနည်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။
လူတစ်ယောက်သည်အစာမစားလိုသည့်အတွက်ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုကိုဖယ်ရှားမည့်အစား Saxenda သည်အစာစားပြီးလျှင်အစာစားခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုနှေးစေသည်။
နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့်၊ အစားအသောက်ဖိုင်ဘာဖြစ်ပျက်သည်နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ပျက်သော်လည်း ပို၍ နှေးကွေးသည်။
ဤနည်းအားဖြင့်လူတစ် ဦး သည်မူးယစ်ဆေးမှကတိပေးထားသည့်ရလဒ်များမပြည့်မှီမှီအစာနည်းနည်းစားရန်နောက်အစာစားပြီးလျှင်သွားသည်။
သတိရပါ - Saxenda မှထုတ်ပြန်သောရလဒ်များသည်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် ၁၀% ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်သော်လည်းအဓိကအားဖြင့်ရလဒ်များမှာလူတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ကွဲပြားမှုနှင့်လူတစ် ဦး ချင်းစီ၏လုပ်ဆောင်မှု၊ အစားအစာနှင့်စွမ်းအားတို့ကြောင့်ကိုယ်အလေးချိန်ကျသည်။
Saxenda ကိုဘယ်သူသုံးနိုင်လဲ။ contraindications ရှိပါသလား
ANVISA မှထုတ်ပေးသော်လည်း Saxenda သည်ကိုယ်အလေးချိန်ကျလိုသူတိုင်းကိုမထောက်ခံပါ။
ယေဘုယျအားဖြင့် Saxenda သည်လူ၏ BMI (Body Mass Index) အတိုင်းအတာနှင့်လူ ဦး ရေ၏ ၃၀% အထက်ပါ ၀ င်သောလူများအတွက်သာဆိုလိုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာအဝလွန်ခြင်းဟုခေါ်သည်။
သို့သော်စည်းမျဉ်းတိုင်းတွင်ခြွင်းချက်ထားရှိခြင်းကြောင့် Saxenda ကိုအခြားလူအုပ်စုအတွက်ညွှန်ပြသည်။ အဝလွန်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောရောဂါများဖြစ်သောမြင့်မားသောသွေးဖိအား၊ အမျိုးအစား ၂ ဆီးချိုရောဂါ၊ ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းသည်အဝလွန်ခြင်းနှင့်ဆက်နွှယ်မှုမရှိသောကြောင့်ဤကိစ္စများတွင် BMI ပင်နိမ့်ကျနိုင်သည်။
နောက်ဆုံးပေးသောအချက်မှာ Saxenda ကို ANVISA မှထုတ်ပေးသော်လည်း၊ ၎င်းကိုမည်သည့်ဆေးဆိုင်တွင်သင်တွေ့လိမ့်မည်ဟုမဆိုလိုပါ။
ပိုမိုသင့်လျော်သောစျေးနှုန်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောပေးပို့ချိန်ကိုရရှိနိုင်သည့်အွန်လိုင်းစျေးဝယ်နေရာများတွင်ဤပစ္စည်းကိုရှာဖွေပါ။ Saxenda ကိုမ ၀ ယ်ခင်သင်၏ BMI ကိုသိရန်မမေ့ပါနှင့်။ ၎င်းသည်အသုံးပြုသူများအတွက်အထူးသင့်တော်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Saxenda ကိုလူနာမှလျှောက်ထားနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အတွင်းကြွက်သားများအသုံးချရန်မလိုအပ်သကဲ့သို့၎င်းသည်အရေပြားအောက်တွင်ရှိသည်။
အပေါ်အတွေး ၁၂၂ ခုSaxenda: ANVISA ထုတ်ပေးတဲ့ပါးလွှာတဲ့ဆေး။"
5:2016 pm မှာမတ်လ 20, 10 - Edit
24:2016 pm မှာသြဂုတ်လ 17, 44 - Edit
8:2016 pm မှာမတ်လ 23, 21 - Edit
အလွန်ကောင်းသည်။ ငါ့မှာအဝလွန်ခြင်းပြproblemနာရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ကံမကောင်းတာငါမဝယ်နိုင်ဘူး၊ မတတ်နိုင်ဘူး၊ အရမ်းမြင့်တယ်
19:2016 pm မှာမတ်လ 12, 16 - Edit
maria cristina Santana က de Paula
25:2016 pm မှာမတ်လ 19, 13 - Edit
ငါဒီဆေး Saxenda ကိုဝယ်ချင်ပါတယ်၊ အ ၀ လွန်နေပြီးတန်ဖိုးများကိုသိချင်လို့ပါ။
13:2016 pm မှာပြီလ 14, 48 - Edit
13:2016 pm မှာပြီလ 21, 39 - Edit
ဟင်နာ! Saxenda ကိုဆေးဆိုင်များတွင်ရောင်းသည်။
25:2016 pm မှာပြီလ 16, 11 - Edit
saxenda ၏အဘယျတန်ဖိုးကို? ဘယ်မှာဝယ်လို့ရမလဲ
Adriana Khan က
25:2016 pm မှာပြီလ 17, 00 - Edit
အဝလွန်သူတွေကသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ရဲ့ ၁၀% ကိုသာလျော့ချဖို့ကူညီပေးတဲ့ဆေးတစ်မျိုးဘယ်တော့မှလိုအပ်ပါသလဲ။ အဝလွန်သူများသည်များသောအားဖြင့်ကိုယ်အလေးချိန်ထက် ၅၀% ပိုများသည်။ ဘုရားသခင့်အတွက်၊ လူတစ် ဦး သည်အသက် ၉၀ ရှိလျှင် ၉ ကီလိုဂရမ်ဆုံးရှုံးမည်လော။ ငါတစ်ယောက်တည်းအစားအသောက်ဖြင့်အသက် ၂၀ ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ အဝလွန်သူတစ် ဦး သည်ဆေးဝါးများသောက်သုံးပါကသူသည်ကယ်လိုရီနည်းသောအစားအစာဖြင့်သာကိုယ်အလေးချိန်မကျသည်မှာယုတ္တိရှိသည်။ ဘာမိုက်မဲသောအရာ။
25:2016 pm မှာမေလ 12, 55 - Edit
25:2016 pm မှာမေလ 15, 44 - Edit
ဟုတ်ကဲ့! Saxenda ကိုဆေးဆိုင်များတွင်ရောင်းသည်။
21:2016 pm မှာဇူလိုင်လ 14, 25 - Edit
30:2016 pm မှာမေလ 13, 25 - Edit
Elisandra salino de Oliveira သပိတ်ပင်
1:2016 pm မှာဇူလိုင်လ 19, 31 - Edit
24:2016 pm မှာသြဂုတ်လ 17, 43 - Edit
ယခု၎င်းကိုဆေးဆိုင်များတွင်တွေ့နိုင်သည်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူရောက်လာပြီးအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှသူ့ကိုရှာတွေ့ဖို့ပိုလွယ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ထိုအမှန်ကန်သော, မည်သည့်ဆေးဆရာဝန်တစ် ဦး ကသတ်မှတ်ပေးရပါမည်!
15:2016 pm မှာဇူလိုင်လ 14, 35 - Edit
မင်္ဂလာပါကောင်းသောနေ့လည်ခင်း။ saxenda ကိုဘယ်မှာဝယ်ရမလဲသိချင်ပါတယ်၊ သင်ပို့ပေးတယ်၊ ဘယ်လောက်ကျလဲ၊ အဖြေကိုစောင့်နေတယ်။
4:2016 pm မှာသြဂုတ်လ 01, 25 - Edit
မင်္ဂလာပါ၊ saxenda ကိုမြင်တွေ့ပြီးပြီ၊ ဘယ်ဆေးဆိုင်လဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်
24:2016 pm မှာသြဂုတ်လ 17, 40 - Edit
ဟုတ်ပါတယ်၊ ရောင်းပြီးသားပါ။ ဝင်ရောက်ရန်ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ http://bit.ly/saxenda-comprar
5:2016 pm မှာသြဂုတ်လ 07, 56 - Edit
24:2016 pm မှာသြဂုတ်လ 17, 42 - Edit
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကဘရာဇီးကိုရောက်ခါစပဲရှိသေးတဲ့ဆေးပဲ။ ရယူရန်နှင့်စျေးနှုန်းကိုရှာရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ http://bit.ly/saxenda-comprar.
10:2016 pm မှာသြဂုတ်လ 13, 46 - Edit
ငါတကယ်ဒီဆေးကိုဘရာဇီးမှာဘယ်တော့ရောင်းမှာလဲသိချင်တယ်။ Anvisa Libero ကဘယ်သူမှစကားမပြောတော့ဘူး!? ဘယ်မှာပိုဝယ်ချင်လဲ? မည်သူမဆို saxenda ဝယ်ဖို့ဘယ်လိုသိတော်မူသည်
14:2016 pm မှာသြဂုတ်လ 00, 29 - Edit
ကောင်းသောညပါ။ saxenda nno brazil ဘယ်မှာဝယ်လို့ရမလဲ
14:2016 pm မှာသြဂုတ်လ 00, 30 - Edit
ငါ saxenda ချင်တယ် ...
22:2016 pm မှာသြဂုတ်လ 15, 38 - Edit
ဆေးပညာ saxenda ဘယ်မှာရှိသနည်း, ထို anvisa ဤမျှလောက်ပြော !!!
24:2016 pm မှာသြဂုတ်လ 14, 08 - Edit
ငါ Saxenda ကိုဘယ်ဆေးဆိုင်မှာတွေ့နိုင်လဲ၊ စျေးကဘာလဲ။
မင်္ဂလာပါ Eralza! သင်သည် Saxenda ၏တန်ဖိုးကိုဒီမှာနှိပ်ခြင်းဖြင့်စစ်ဆေးနိုင်သည်။ http://bit.ly/saxenda-comprar
14:2016 pm မှာစက်တင်ဘာလ 13, 43 - Edit
တစ်စုံတစ် ဦး ကမူးယစ်ဆေးဝါး၏တန်ဖိုးကိုသိနိုင်သည်
20:2016 pm မှာစက်တင်ဘာလ 12, 19 - Edit
ငါပြီးသားအိုင်တီ, အိုင်တီကုန်ကျစရိတ် R ကို $ 750,00 03 ဆီးချိုနှင့်အတူ, ဒါပေမယ့်သင်တစ် ဦး ဓာတ်ခွဲခန်းမှတ်ပုံတင်ပါစေနှင့်စျေးနှုန်း R ကို $ 495,00 သို့ကျသည်။
24:2016 pm မှာစက်တင်ဘာလ 15, 05 - Edit
28:2016 pm မှာစက်တင်ဘာလ 20, 14 - Edit
မင်္ဂလာပါ millenarians ငါမင်း saxenda နဲ့ကိုယ်အလေးချိန်ကျနေပြီလားသိချင်ပါတယ်မနက်ဖြန်ငါဝယ်မယ်။
ကောင်းသောည, MILENA ။
ရီယိုဒီဂျနေရိုတွင်စင်္ကာပူသည်စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက်တွင်Venâncioဆေးဆိုင်သို့ရောက်ရှိလာပြီးကောင်တာ၌မှာယူစဉ်မှတ်ပုံတင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်ဝယ်ယူသည့် နေ့မှစ၍ ယနေ့အထိ 27kg ဖယ်ရှားပြီးဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်လေ့ကျင့်ခန်း။ ငါ့ရဲ့ endocrinologist ကငါ့ကိုယ်ခန်ဓာကိုအသုံးပြုဖို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အနည်းဆုံးဆေးထိုးမှုကနေစခဲ့တယ်။ ဗစ်ဗိုစိုရောဂါကိုငါအရမ်းစွဲလန်းခဲ့ပြီးအန်တာကိုဆိုင်းငံ့ခဲ့ရတယ်။ ငါဆီးချိုရောဂါ II ဖြစ်တယ်။ Saxenda, ငါပြောခဲ့သကဲ့သို့, ကန ဦး ဆေးထိုး2ဖြစ်ခဲ့သည်။ အခု ၀.၆ + ၅ ကလစ်ကနေသွားပြီ။ မူးယစ်ဆေးဝါးသည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းကိုဖယ်ရှားပေးသည်။ ဤပြproblemနာကိုနားမလည်သူများက၎င်းတို့သည်အစားအစာနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန်လိုအပ်ပါကဆေးသည်မလိုအပ်ဟုထင်ကြသည်။ ဟုတ်တယ် ကျန်းမာသောအစားအစာအတွက်မကောင်းသောအစားအစာကိုပြောင်းလဲမည့်အစား၊ ဆေး၏အကျိုးအာနိသင်ကို အသုံးချ၍ ကိုယ်အလေးချိန်တက်လာခြင်းနှင့်ဆေးဝါးများအလုပ်မလုပ်ဟုထင်မြင်သူများရှိကြသည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်အတင်းအကျပ်မဖြစ်အောင်တားဆီးပါကဤအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုယူပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အလေ့အထများကိုပြောင်းလဲစေ။ ၊ !!! လူတိုင်းကံကောင်းပါစေ
ဒီ site မှာသိုင်းရွိုက်ကင်ဆာရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကိုကြီးကြီးမားမားမထားဘူး !! ဖြေရှင်းနည်းများထက်ပိုမိုအန္တရာယ်ပေးနိုင်သောဆေးတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ အခမဲ့မဟုတ်ပါ !! ငါကကိုယ်အလေးချိန်၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကမ်းလှမ်းသောအရာကိုတကယ်ကြိုက်တယ် !! ADVERSE RISKS ကိုသင်ဖတ်လျှင်၊ ကျွန်ုပ်သည်ရရှိသောနည်းအတိုင်းသင်ပေးလိမ့်မည်။ ????
23:2016 pm မှာနိုဝင်ဘာလ 17, 26 - Edit
ဒီဆေးကအရမ်းကောင်းတယ်။ ၃ ကီလိုကိုငါဆုံးရှုံးပြီးပြီ။ ငါကြိုက်တယ်MárciaUberlândia MG သင် Drogasil မှာရှာနိုင်သည်
25:2016 pm မှာနိုဝင်ဘာလ 12, 35 - Edit
ငါ lipiblock နှင့်ဆက်စပ်, နှစ်ပတ်ကြားကာလနှင့်အတူနှစ်လကြာ saxenda သုံးပြီးခဲ့ကြပြီး 6kg ခန့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ - အနည်းငယ်ပျို့ချင်သော်လည်းလုံးဝခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ငါယူပြီးသမျှအနည်းငယ်ရှိခဲ့သည်ကိုကြည့်ပါကအကောင်းဆုံးရိုက်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ခြွင်းချက် !!
26:2016 pm မှာနိုဝင်ဘာလ 14, 52 - Edit
ငါမနေ့က saxenda ကိုစတင်သုံးစွဲခဲ့ပြီးကန ဦး ထိုးသွင်းမှုသည် ၀.၆ ဖြစ်သည်။ တစ်ပတ်သို့မဟုတ်တစ်လလား
26:2016 pm မှာနိုဝင်ဘာလ 17, 54 - Edit
helcio ခ Junior
27:2016 pm မှာနိုဝင်ဘာလ 20, 49 - Edit
ငါတစ်ပါတ်အကြာကယူစတင်ခဲ့ပြီးငါပြီးသား 01 ကီလိုဂရမ်နှင့်တစ်နှစ်ခွဲဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ဒီဆေးကစိတ်ကျေနပ်မှုပေးပြီးအစာခြေခြင်းကိုနှေးကွေးစေပါတယ်။ ပထမအပတ်တွင် ၀.၆ မီလီဂရမ်၊ ဒုတိယတွင် ၁.၂ မီလီဂရမ်၊ တတိယတွင် ၁.၈ မီလီဂရမ်နှင့်စတင်ပါ။ ငါကပျော်တယ်၊ ကိုယ်အလေးချိန်မြန်စေဖို့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုကိုဆေးနဲ့ဆက်စပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ သာဆေးညွှန်းနှင့်အတူဝယ်ယူ။
1:2016 pm မှာဒီဇင်ဘာလ 23, 43 - Edit
22:2016 pm မှာဒီဇင်ဘာလ 11, 33 - Edit
ဟဲလို! ငါအစိုးရကလှူဒါန်းသင့်တယ်ထင်တယ်၊ ပတ်လမ်းအဝလွန်သူများသည်အဆုတ်ပြlikeနာများကဲ့သို့ပြင်းထန်သောရောဂါဖြစ်နေပြီးဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
27:2016 pm မှာဒီဇင်ဘာလ 15, 48 - Edit
ဟိုင်းဘယ်နေရာမှာငါ ၀ ယ်ယူပြီး Joinville SC မှာနေတယ်
10:2017 မှာဇန်နဝါရီလ 15, 56 - Edit
ငါအရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားခဲ့တယ်၊ ငါ့မှာ imc ၂၈.၅၊ ၁.၈၁ မြင့်တယ်၊ ငါက ၉၃.၅ ပေါ့။ အဆီပိုများခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တွင်အသည်းရောင်ရောဂါ (steatosis)၊ triglycerides နှင့် cholesterol မြင့်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်သည်အာဟာရပညာရှင်၏လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်းပြန်လည်ပညာသင်ယူနေသော်လည်းအစားအစာသည်အလွန်ကန့်သတ်ထားပါသည်။ မင်းအခွန်ကောက်ခံတာကိုဂရုစိုက်တယ်၊ ဘရာဇီးမှာဘာကြောင့်ဒီလောက်ခက်ခဲရတာလဲ။
7:2017 pm မှာဖေဖော်ဝါရီလ 13, 57 - Edit
VICTOZA ကိုဝယ်ယူရန်ဤမျှလောက်ကောင်းသည်။ မည်သည့်ဆေးဆိုင်တွင်မဆိုဆေးဆိုင်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။
23:2017 pm မှာဖေဖော်ဝါရီလ 11, 54 - Edit
ကျွန်ုပ်၏ endocrinologist သည် Liraglutide ဆေး (Victoza နှင့် Saxenda) နှစ်လုံးကိုကြိုက်သော်လည်းသူသည်လူနာများကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောရလဒ်များပြသသောကြောင့်သူသည် Saxenda ကိုပိုမိုညွှန်းသည်။
8:2017 pm မှာဖေဖော်ဝါရီလ 23, 44 - Edit
ဈေးအသက်သာဆုံးနေရာကတော့ venancio ဆေးဆိုင်မှာဖြစ်ပြီး reais ၄၉၀ ပါ။
9:2017 pm မှာဖေဖော်ဝါရီလ 10, 24 - Edit
ငါဒီနေ့ကုသမှုကိုစတင်ခဲ့ ဘယ်လောက်ကြာကြာခံမလဲ ၂၀.၀၃ ရက်တွင်ဆရာ ၀ န်ထံပြန်ရောက်သည်အထိကျွန်ုပ်သည် ၀.၆ ဖြင့်ဒုတိယအပတ် ၁.၂ နှင့် ၁.၈ ရက်များ၌စတင်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်နောက်ထပ် ၀ ယ်ရန်လိုအပ်မလိုကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ ငါပွဲတော်မှာခရီးသွားတယ်။ ဘယ်ကိုသွားရမှန်းငါမသိဘူး။
23:2017 pm မှာဖေဖော်ဝါရီလ 11, 53 - Edit
Rita, ငါ့အစီရင်ခံစာကိုကြည့်ပါကကူညီပေးသည်ရှိမရှိကြည့်ပါ။ အထုပ်ထဲထည့်သွင်းခြင်းသည်အပတ်တိုင်းဆေးပမာဏတိုးရန်ပြောသည်
မင်းရဲ့အဖြစ်အပျက်ကဘာလဲဆိုတာငါမသိဘူး၊ ငါမှာ Hashimoto (autoimmune သိုင်းရွိုက်ရောဂါ) ရှိတယ်။ ဒါကြောင့်ငါဒီဆေးကိုကိုယ့်ဘာသာကိုယ်မဝယ်ခဲ့ဘူး။ ဆရာဝန်ကဆေးသောက်ပြီးတိုင်း ၂ ပတ်လောက်နေဖို့ပြောတယ်။
ကျွန်ုပ်ကိစ္စတွင်သေတ္တာတစ်ခုလုံးသည် ၂-၃ လအထိကြာလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။
17:2017 pm မှာပြီလ 14, 08 - Edit
2:2017 pm မှာမေလ 00, 43 - Edit
ငါ 8 ကီလိုဂရမ်ဖယ်ရှားပစ်ပြီးပါပြီ ရက်ပေါင်း 40 အတွင်း
22:2017 pm မှာဇွန်လ 09, 22 - Edit
မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ! သင်မည်သည့်ပမာဏကိုသောက်သုံးသနည်း။ ကျွန်ုပ်ဆရာဝန်က ၁ ပတ် ၀.၆၊ ၂ ပတ် ၁.၂ နှင့် ၁.၈ ပြီးနောက်။
26:2017 pm မှာဇွန်လ 13, 46 - Edit
မင်္ဂလာနေ့လည်ခင်းပါ၊ Silvana မင်းရဲ့အစားအစာကဘာလဲ ????
6:2018 မှာဇန်နဝါရီလ 18, 43 - Edit
ငါမနေ့ကငါကုသမှုကိုစတင်ခဲ့ပြီးစက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသောအော့အန်ခြင်း၊ အစာအိမ်အားနည်းနေသူများအတွက်သင်ဆေး သောက်၍ မရနိုင်ပါ။
9:2018 မှာဇန်နဝါရီလ 07, 53 - Edit
15:2018 မှာဇန်နဝါရီလ 21, 15 - Edit
Karem, ငါ့ endocrine သတ်မှတ်ထားသော saxenda + vonau flash ကိုဖျားနာခြင်းသို့မဟုတ်အော့အန်ခြင်းမခံစားရစေရန်…ကြိုးစားကြည့်ပါ။
20:2018 မှာဇန်နဝါရီလ 00, 37 - Edit
22:2018 မှာဇန်နဝါရီလ 11, 14 - Edit
ဟိုင်းလီဒီယာ! Saxenda ကိုမည်သို့ယူရမည်နှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏အကြံဥာဏ်အတွက်သင့်ဆရာဝန်နှင့်တွေ့ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
15:2018 pm မှာသြဂုတ်လ 15, 26 - Edit
Oxandrolone: ​​ဘာအတွက်လဲ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိပါသလား။ စာရွက်လိုချင်လား?